Fanadinana ny fanjakana ny fanadinam-panjakana | NewsMada
Fanadinana ny fanjakana ny fanadinam-panjakana
Par Taratra sur 14/07/2018
Hanao ahoana ihany ny amin’ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara amin’izao, indrindra ny amin’ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana? Tsy hita be ihany: velom-panahiana mafy ny ray aman-dreny, mitsanga-mitoetra ny mpianatra. Hisy ihany sa tsia ny fanadinana amin’ity taona ity? Ahina mafy ny ho taona maty.
Samy tsy matoky tena sy tsy mino izay resaka mandeha etsy sy eroa ny rehetra amin’izany. Na sekolim-panjakana io, na sekoly tsy miankina. Ho very taona iray ny mpianatra? Hatramin’izao, tsy hita izay tena vahaolana. Mifanenjana sy mifanenjika hatrany ny tomponandraiki-panjakana sy ny sendikàn’ny mpampianatra mitokona.
Vitan’ny resaka sy kabary ve ny raharaha? Na ho voavaha ho azy amin’izany ny olana… Fanilihana andraikitra amin’izay tompon’antoka amin’ny taona maty, fifanomezan-tsiny amin’ny fanadiovana sy fanamarinan-tena… Izao, ohatra, vao milaza ny eo anivon’ny fanjakana fa handray andraikitra. Inona no natao hatramin’izay?
Lazaina mandrakariva ny hoe tsy misy olana tsy voavaha amin’ny fifampidinihana, tsy maintsy fifampidinihana ihany no hiafaran’ny raharaha. Mby aiza? Na vokatry ny fifampidinihana, ohatra, ny hoe tsy mihemotra izany ny fanadinam-panjakana, tsy misy izay hoe taona maty fa tsy misy hahazo tombontsoa amin’izany.
Ambara koa fa efa lasa politika ny raharaha, mifangaro ny fitakiana sendikaly sy ny hetsika politika… Resaka avokoa izany? Kabary tsy valina. Hafa ny zava-dehibe sy mahamaika ny mpianatra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra amin’izao: hisy ny fanadinana, ho vita ny fandaharam-pianarana, ho voatsara araka ny tokony ho izy ny fanadinana…?
Natao hamaha izany ny tomponandraiki-panjakana fa tsy hitsapatsapa, hanome tsiny, hanilika andraikitra, hanao amboletra… Inona àry ny vahaolana azo antoka sy mahomby ary maharitra? Amin’izay famahana olana izay: raha mahay, fianarana; raha tsy mahay, feno arina, araka ny ohabolan-drazana. Ho hita raha ho afaka…
Fanadinana ny fanjakana izay, raha ho vita ihany na tsia ny fanadinam-panjakana sy ny fandaharam-pianarana.